Ukuphupha ngo-Eber Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Kwintsomi yamaJamani, uFrey, uthixo wenzala nothando, kodwa nowokuvuna nobutyebi, wayehlala ekhwela inkunzi yehagu yasendle. Kungenxa yoko le nto iiTeuton ngokubanzi zinxulumana neebhokhwe zasendle kunye nobukhulu kunye nokuzala. Kubo, iinkunzi zeenkomo nazo zaziluphawu lokwenene lobudoda. Ngaphandle kwamaCelt, ihagu yasendle yayinxulumene kakhulu nehlathi kunye nothixokazi wokuzingela uArduinna. Kuba isithixokazi kwakusithiwa sinoburhalarhume kwaye sinesibindi, inkunzi yehagu yayihlala ikhonzwa njengophawu lwemfazwe.
Ithetha ntoni isimboli yamaphupha "inkunzi yehagu" kuwe? Kutheni uyibonile ephupheni lakho? Bendifuna ukuxelela ntoni? Cinga emva kwephupha lakho kwaye uzame ukukhumbula zonke iinkcukacha. Ukutolikwa ngokuchanekileyo kwamaphupha, kufuneka ubandakanye zonke iinkcukacha zephupha. Ayisiyophawu lodwa, kodwa ikwakhona imeko obukuyo ibalulekile.
1 Uphawu lwephupha «iinkunzi zasendle» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «iinkunzi zasendle» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iinkunzi zasendle» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iinkunzi zasendle» - ukutolikwa ngokubanzi
Kumaphupha amaninzi, imibutho yamagama yindlela yokuqinisa umxholo ochanekileyo wephupha. Isimboli yamaphupha "inkunzi yehagu" ikwayikhonkco lokucinga. Igama elithi "inkunzi yehagu" ngokubanzi lithetha "ngaphezulu" ephupheni, ngengqondo yokugcwala kakhulu.
Isimboli yamaphupha "ihagu" ifumaneka kutoliko jikelele lwamaphupha e izicwangciso zesondo y Ithemba. Mhlawumbi iphupha belinomntu obonayo ixesha elide ofuna ukumazi ngcono. Emva koko iphupha likuxelela ukuba lifikile ixesha lokwenza. Nangona kunjalo, ukuba isilwanyana sihamba xa silele, iphupha kufuneka lifune omnye umntu.
Ukuba umntu ophuphayo ubona ingulube yasendle ephupheni lakhe, iintshaba zakhe ziyamoyikisa kwaye zimoyikise. Nokuba abamelwane bakho abakhohlakeleyo, ngokokuchazwa ngokubanzi kwamaphupha, bafuna ukukwenzakalisa. Ukudibana nenkunzi yasendle ephupheni kuthetha ukuba ephupheni ukuba ngesiganeko esithile kwi el mundo ukuvuka. ukuthembela ukudana nokutshatyalaliswa komntu.
Ukuzingela ingulube yasendle ekuchazeni amaphupha kubonisa imizamo engaphumelelanga. Ukuba, ngokuchaseneyo, iphupha lilandelwa sisilwanyana ngelixa silele, ke umntu uya kulungela. Ukwahlulahlula ngaphambili. Ukuba iphupha liyabamba okanye lidubule ingulube yasendle, yiyo loo nto kuye. Suerte ubuqiniseka. Isimboli yephupha ibonisa ingozi esondeleyo xa iphupha lihlaselwa yingulube yasendle kwaye yenzakele.
Ukubonakala kwamazinyo ehagu ephupheni kufanekisela ithamsanqa kwaye Izinzuzo.
Uphawu lwephupha «iinkunzi zasendle» - ukutolikwa kwengqondo
Kwingcaciso yengqondo yamaphupha, uphawu lwephupha lumele amandla Indoda-isilwanyana kunye neemfuno zesondo ezingalawulekiyo. Nangona kunjalo, ukuphupha akufuneki kuyicinezele le minqweno ngamandla kwihlabathi lokuvuka, kuba kungenjalo unokulahleka ngokulula.
Ngokunxulumene neminyhadala okanye imibhiyozo, uphawu lwephupha «iinkunzi zasendle» Ubudlakudla y Nqwenela zimele. Ukutolikwa kwamaphupha ezengqondo, iphupha lokubamba okanye ukudubula inkunzi yasendle limele isilumkiso sommelwane onomona.
Uphawu lwephupha «iinkunzi zasendle» - ukutolika kokomoya
Isimboli yamaphupha "ihagu" inokusetyenziselwa ukutolika amaphupha okomoya njengophawu lwe ubuninzi y Ukomelela itolikwe. Kwintsomi okanye iintsomi, nangona kunjalo, iinkunzi zeenkomo zinokumela ububi.
Indlela isilwanyana samandla esiquka ngayo uphawu lwephupha bulumko, Amandla obomi y Conocimiento kwinto enye.